Sida loo soo degsado fiidiyowyada YouTube-ka ee Android adigoon adeegsan barnaamijyada | Androidsis
Sida loo soo dejisto fiidiyowyada YouTube-ka ee Android-ka oo aan lahayn barnaamijyo
YouTube waa barnaamij muhiim u ah malaayiin telefoonada Android ah. Waad ku mahadsan tahay waxaan marin u helnaa dhammaan noocyada fiidiyowga ee taleefanka ah waxaanna dhegaysan karnaa muusikada markasta oo aan dooneyno, iyo howlaha kale. Codsigu wuxuu helayay shaqooyin cusub waqti ka dib, sida toos u tabinta. In kasta oo adeegsadayaashu had iyo jeer doonayeen awoodda ay ku soo degsan karaan fiidiyowyo.
Ilaa hada, hadaan rabno kala soo bax qaar ka mid ah fiidiyowga YouTube-ka ah 'Android', waxay ahayd inaan u adeegsanno codsiyo dhinac saddexaad ah. Laakiin waxaa jira xeelad aad u fudud, oo noo oggolaaneysa inaan ka soo dejino biraawsarka, iyada oo aan loo isticmaalin codsiyada. Wax badan ayaan kaaga sheegi doonaa hawlgalkeeda.
Sidaa darteed, waxaan u isticmaali doonnaa YouTube biraawsarka oo aan raadineynaa fiidiyaha taasi waxay naga daneyneysaa shabakadda caanka ah. Kadib waxaan eegaynaa cinwaanka cinwaanka biraawsarka, halkaas oo aan ku arki doonno URL-ka fiidiyowgan su'aasha laga qabo. Waxa kaliya ee ay tahay inaan waxyar ka beddelno URL-ka fiidiyowga la sheegay, si aan u soo dejino fiidiyowga.
Waxaan ka helnaa URL-yada wax badan ama ka yar sidan www.youtube.com/sk874ank. Waxa aan qaban doonno waa in SS lagu daro isku mid ah, si ay noogu qaadato bog aan ku soo dejisan karno fiidiyaha su'aasha ku jira qaab fudud oo fudud. Sidaa darteed, waxay noqoneysaa URL noocan ah: www.ssyoutube.com/sk874ank
Kadibna waxaa naloo soo bandhigay suurtagalnimada inaan kala soo baxno fiidiyaha. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan dooranno qaabka aan dooneyno inaan ku soo dejino taleefanka, marka lagu daro tayada fiidiyahaas. Sidaas darteed isticmaale kasta wuxuu doortaa ikhtiyaarka ugu raaxada badan ee kiiskiisa. Aad u raaxo badan oo fudud kiiskan.
Marka waxaan ku soo dejisan karnaa fiidiyow kasta oo YouTube ah Android. Waxa ugu fiican ayaa ah marka Aynu isticmaalno khiyaanadan aan ku qabanno WiFimaaddaama fiidiyowyadan ay noqon karaan kuwo culus. Marka waxaan iska ilaalinaa dhibaatooyinka, sida cunista xog farabadan, adoo adeegsanaya xeeladan fudud sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo soo dejisto fiidiyowyada YouTube-ka ee Android-ka oo aan lahayn barnaamijyo
EaseUS MobiSaver ee loogu talagalay Android oo ah qiimo dhimis 50%, ayaa soo kabanaysa xogta la tirtiray
Sida loo arko intee in le'eg oo WhatsApp chats-kaaga ku jira